Gubaa Masqalaa, sirna gammachuufi jaalalaa
Gubaa Masqalaa, sirna gammachuufi jaalalaa Featured
Sirni gubaa wayita adeemsifametti
Kibxata galgalaa aduun seentee dimimmisaa’eera. Dirreen masqalaa Finfinnee hawaasaa lakkoofsaan tilmaamuun nama dhibuun guutee, reefuu waan bari’aa jiru fakkaata. Dimimmisa keessaa wayita sirni gubaa masqalaa geggeeffamu, dirrechi qaanqeefi ifa gucaatiin uffifamee, utubaan damaraa oggaa ibiddaan marfamee gamaafi gamanatti ifu qaanqeewwan dhukaafamaniifi ifa gucaan wal utubee daraaraa keelloon waan marfamee jiru fakkeesseera. Damarichis muka guddaa keelloon marfamee jiru fakkaateera.
Ayyaanichis faaruuwwaniifi agarsiisawwan garagaraatiin faayameera. Jiraattota magaalaa Finfinnee, abbootiin amantii, qondaaltota mootummaa, amabaasaaddarootaafi lammiileen biyya ala hedduun ayyaanicharratti hirmaataniiru.
Lammiilee biyya alaa sirnicharratt argaman keessaa oggantuu Daaw'annaa Lammii Ispeen kan taateefi yeroo jalqabaatiif sirna gubaa masqalaarratti kan hirmaatte Emmaa Liiraa, Itoophiyaan hambaalee seenaafi bakkeewwan hawata tuuristii hedduu, gama aadaanis ta’e amantiitiin qabaachuun biyya carraa qabeettii akka taasisu dubbatu. Haa ta’u malee, qabeenyawwan kanneen addunyaatti beeksisuufi sona akka qabaatan hojjechuu qabdi jedhu.
Kana gochuufis Ministeerri Aadaafi Turizmii ciminaan hojjechuu akka qabuudha kan dubbatan. Sirni gubaa masqalaa kunis daran kan isaan gammachiiseefi akkaataan sirnichi ittiin geggeeffamu hawaasa ayyaanicha kabaju kan dinqisiifatan ta’uus ni himu. Waa’ee masqalaa hanga beekan nuuf himuun, hiriyoonni isaaniifi lammiileen biyya alaa biroonillee akka dhufanii daaw'atan gafataniiru.
Si’a lammaffaaf ayyaanicha hirmaachaa kan jiran lammii Kaariibiyaanii Mistar Ras Bushman Rolanjow, Itoophiyaan biyya ayyaana qabeettiidha jedhu. Akkasaan jedhanitti waa’ee ayyaanichaa gaafa jalqabaa hirmaatan homaan waan beekan akka hinqabneefi erga beekanii ayyaanicharratti hirmaachun kan isaan gammachiisu ta’uudha kan eeran. Ayyaana namatti toluufi jaalala irraa horataniidhas jedhu.
Kana malees, lammiileen biyya alaa biroon yaaduma walfaakkaa eeranii, ayyaanicharratti hirmaachuun hedduu kan isaan gammachiisu ta’uu nuuf ibsaniiru.
Sirna kabaja ayyaanichaarratti, Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haasawa taasisaniin akka jedhanitti, seenaa dhufteefi sababa ayyaanichi ayyaaneffatamuuf bal'inaan ibsanii, hawaasni Itoophiyaa handaaraa hanga handaaraatti kutattummaafi miira jaalala biyyaattiin socho’uudhaan guddinaafi misoomaa galmeessiseen maqaan biyyattii akkuma ganamaa mul’achaa jiraachuu ibsaniiru. Adeemsi guddinaafi misoomaa taasifamaa jirus, olka’iinsi Itoophiyaa dhugoomee maqaan duraaniifi qaroominni biyyattii ture hanga mirkanaa’utti cimee ittifufsiisuu qabna jedhaniiru.
Ayyaanichas wanti adda isa taasisuu wayita phaaphasiin biyya hindii daawwannaa biyyattiitti tasisaa jiran ta’uu eeraniiru. Daaw'annaan isaanis maqaa gaarii, misoomaa, guddinaafi nageenyaa keenyaa kan calaqisiisuudha jedhanii, “Nageenyaafi tokkummaa keenya eeggannee hanga sochoonetti kan nu barbaadu, kabajjoonniifi firri keenyaa ni baay’atu jedhaniiru. Kanaaf, lammiileen biyyattii hundinuu nageenyasaa eeggachuun olka’iinsaa biyyattii mirkaneessuuf akka tattaafatan gaafataniiru. Tibbaa darbes Naannoo Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaan waldaangessanitti walitti bu’iinsa uumameen lubbuufi qabeenya manca’eef gadda itti dhagaa’ame ibsaniiru.
Kantiibaan Magaalaa Finfinnee, Obbo Dirribaa Kumaas gamasaaniin, ayyaanni masqalaa 'yuneskootti' galmaa’uun faayidaa gama turizmiitiin argamsiisuu bira darbee, maqaa gaarii byyattii addunyaarratti gama ijaaruutiin gahee olaanaa gumaachaa jiraachuu ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti, amantiifi mootummaan gargaara ta’us, ajandaa biyyaalessaa tokkorratti garuu kan waliin hojjetan ta'uu ibsaniiru.
Adeemsaa haaromsa biyyattiin eegaltee milkeessuuf nageenyi murteessaa waan ta'eef, dhaabbileen amantii hundi barbaachisummaa nageenyaa, waldanda'uufi misoomaa bal'inaan barsiisuutu qabu jedhaniiru.
Torban kana/This_Week 33750
Guyyaa mara/All_Days 1625545